Shiinaha 40Khz Ultrasonic Nano Spray Device leh Isbadal Heer Sare ah Soo-saar Dhaqameedka Laba-dareeraha ah iyo Warshad | Qianrong
40Khz Ultrasonic Nano Spray Device leh Beddel Frequency Sare Dhaqan-buufinta Labada-dareere
40K xereynta nano ultrasonic waa tiknoolajiyad xereen gaar ah, taas oo ah habka xereenka ee ku saleysan tiknoolajiyada qanjirka 'atomized ultrasonic'. Marka la barbardhigo ku-buufinta dhaqameed ee laba-dareeraha ah, ku-buufinta atomka ultrasonic waxay gaari kartaa isku mid ahaansho wanaagsan, dhumucda maqaarka khafiifka ah iyo saxsanaanta sare. Isla mar ahaantaana, sababta oo ah mashiinka lagu buufiyo ultrasonic ayaa la atomikarin karaa iyada oo aan laga helin gargaarka cadaadiska hawada, isticmaalka xereenka ultrasonic wuxuu si weyn u yareyn karaa buufinta rinjiga inta lagu guda jiro howsha xereynta, iyo xaqiijinta ujeedka badbaadinta rinjiga. Heerka isticmaalka xereenka ultrasonic wuxuu ka badan yahay 4 jeer midka lagu buufiyo dhaqamada laba-dareeraha ah.
Ultzz nozzles waxay ku shaqeysaa iyadoo loo beddelayo hirarka dhawaaqa-soo-noqnoqda tamar farsamo, tamarta farsamada waxaa loo wareejiyaa dareeraha si loo soo saaro mowjado taagan. Dareeraha waxaa loo soo bandhigayaa dusha sare ee atomiska iyada oo loo marayo sanka. Marka dareeraha uu ka baxo dusha sare ee atomiga ee mashiinka, wuxuu u kala jabay ceeryaamo wanaagsan oo dhibco yaryar ah, si markaa loo gaaro atomization.
Mashiinka atomiga ah ee 'atomizing ultrasonic' wuxuu ka samaysan yahay daawaha titanium-xoog badan iyo biraha kale ee lahaanshaha, taas oo siinaysa iska caabin kiimiko ah oo wanaagsan iyo sifooyin acoustic aad u fiican. Qaybta korantada korantada waxay ku jirtaa guri xiran oo ka ilaaliya qaybta sanka wasakheynta dibadda.
Hore: Teknolojiyada Atomisation ee Birta ah ee Ultrasonic Ultimate for Powder Tin
Xiga: Qalabaynta Cabbiraadda Qalabka Cabbiraadda Cabbirka Cabbirka Qalabka Halbeegga
Teknolojiyada Atomisation ee Birta ah ee Ultrasonic
Ultrasonic Core Qaybaha Wadista Transducer 3 ...
60Khz 150W Ultrasonic Alxanka Transducer ee Co ...
Gariirka Frequency High Ultrasonic Goynta Mac ...